Efa 25 taona izao no naha-mpitsabo "Tradi-praticien" ahy, hoy izy, ary olona an'arivony maro no efa nositraniko tamin'ny fampiasana zavamaniry natoraly indrindra ireo voan'ny aretina voa. Misy an'ilay antsoina hoe "effet secondaire"
avokoa ny fampiasana zavatra iray eo amin'ny fianantsika, hoy izy, fa na io vary hohaninana isan'andro io aza rehefa atao be loatra ny fatrany dia mety hankarary ny vavonin'ny tena. Tahaka izany koa ireo fanafody ara-tsimika ampiasain'ny dokotera mpitsabo mahazatra io sy ny tambavy omen'ny mpitsabo nentim-paharazana ireny rehefa mihoatra ny dozy tokony hampiasana azy. Samy manana ny fahaizana tandrify azy araka izany na ireo dokotera manome fanafody ny marary tonga ao aminy na ireo mpitsabo nentim-pahazana manome tambavy an'ireo manatona azy ireo ka tsy afaka hifampitsabaka amin'ny fatra tokony omeny ny marary manatona azy tsirairay avy. Avy amin'Andriamanitra avokoa, hoy ity mpitsabo nentim-paharazana iray ity, ny olombelona sy zava-maniry ka mifampiankina tanteraka.Marihako fa nisotra tambavy ny ankamoaran'ny ntaolo Malagasy taloha nefa naharitra an-jato taonany mahery ny taham-pahaveloman'izy ireo.